Wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha - Worldnews.com
Kooxda Chelsea ayaa lasoo wareegtay Kepa Arrizabalaga oo goolhaye u ahaa Athletic Bilbao, kaasoo ay kusoo iibsatay £71m, waa lacagtii ugu badneyd ee abid la siisto laacib booskaasi ka dheella.
Kepa, oo 23 jir ayaa qiima ahaan ka qaalisan Alisson oo ay todobaad ka hor Liverpool kula soo wareegtay £66.8m
Wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha
Kooxda Chelsea ayaa meel wanaagsan waxa u maraya wadahadal ay kula jirto kooxda Athletic Bilbao ee ka dheesha Spain taasoo ay ka doonayso goolhayaheeda Kepa Arrizabalaga,...
Laacibkii hore ee Manchester United, Wayne Rooney, oo dhawaan ka tegay kooxda Everton ayaa sheegay inuu go'aankaasi qaatay maadaama aanu dooneyn inuu waqtigiisa ku lumiyo...
Xulka Spain ee koobka adduunka oo la shaaciyey
Tababaraha xulka kubadda cagta Spain Julen Lopetegui ayaa si rasmi ah u shaaciyey xiddigaha uu u xushay inay dalkiisa u matalaan koobka adduunka ee bisha dambe ka furmaya...
Xanta kubbadda cagta
West Ham iyo Everton ayaa danaynaya ciyaaryahanka afka hore uga dheela Arsenal Theo Walcott oo 28 jir ah, qandaraas cusubna oo uu ku sii joogayo garoonka Emirates ma sii...
Chelsea oo £60 milyan kula soo wareegaysa Alvaro Morata
Kooxda Chelsea ayaa la gaartay Real Madrid heshiis ay 60 milyan oo Pound kagala soo wareegayso weeraryahan Alvaro Morata. Laacibkan u dhashay Spain ayaa hadda sugaya in uu...
Kepa Arrizabalaga oo Chelsea ku biiraya
Bartilmaameedka naadiga Chelsea Kepa Arrizabalaga ayaa bixiyay heshiiska qandaraaskiisa lagu nasaqi karo oo ku dhow 79M oo Euro. Taasi waxay u saamaxeysa in gool wadahaasi...
Bartilmaameedka naadiga Chelsea Kepa Arrizabalaga ayaa bixiyay heshiiska qandaraaskiisa lagu nasaqi karo oo ku dhow 79M oo Euro. Taasi waxay u saamaxeysa in gool wadahaasi uu ka tago naadiga Athletic Bilbao, kuna biiro naadiga Premier League ee Chelsea. ......
Kooxda Manchester United oo haysta koobka FA Cup ayaa gurigeeda ku martigalin doonta Wigan Athletic oo isla koobkan ku guulaysatay sanadkii 2013kii, ciyaartaasi ayayna ugu tartamayaan wareegga afraad. Kooxda difaacanaysa horyaalka Ingiriiska ee Leicester City waxay marti u noqon doontaa Derby County, Chelsea-na waxay magaalada London isku hardiyi doonaan Brentford Millwall oo...
Horyaalka Premier League 2018/19: Magacyada ku soo biiray
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa furmaya, ka dib markii uu furnaa suuqa kala iibsiga cayaartoyda ee xilliga xagaaga. Inkastoo aysan jirin tiro aad u badan oo cayaartoy ah oo Ingiriiska timid, misna cayaartoy tayo sare leh ayaa waddamo dibadda ah kaga yimid Ingiriiska. Halkan waxaan ku eegaynaa Lix ka mid heshiisyadii ugu waaweynaa. Lucas Torreira - Arsenal Ka yimid:...
Laacibka khadka dhexe uga dheella Manchester United, Paul Pogba, ayaan ciyaari doonin kulanka adag ee soo socda. Kooxda Manchester United ayaa maalinka Axada ka hortagayso Manchester City ee ay halka magaalo ka wada dhisan yihiin. Pogba ayaa kaarka casaanka qaatay ciyaartii kooxdiisa ay la...
Leicester City oo lasoo wareegtay Kelechi Iheanacho
Kooxda Leicester City ayaa lasoo wareegtay weeraryahanka Manchester City, Kelechi Iheanacho, ayadoo la rumaysan yahay inay ka bixisay lacag dhan 25 milyan oo Pound. 20 jirkan u dhashay Nigeria, oo 64 kulan oo uu saftay Man City u dhaliyay 21...